Best Hammer malite ịgba: Nke Na-enye Kasị Mma Bang Maka Akpa Gị - Nyocha Nyocha
Best Hammer malite ịgba: Nke Na-enye Kasị Mma Bang Maka Akpa Gị
Gịnị Bụ A Hammer malite ịgba Mgbe Mgbe I Kwesịrị Jiri Otu?
Rotary Hammer vs. Hammer Drill vs. Reill Drill vs. Mmetụta Drill
Mgbe drills & hama drills
Rotary Hammers & Mmetụta Mmetụta
Hammer malite ịgba nkọwa
Ike Torque & Ọsọ
Verslaghachi Nduzi Nduzi
Otu-Speed ​​ma ọ bụ abụọ-Speed
Kedu ka Chuck ahụ si buru ibu?
Nkasi obi na atụmatụ
Họrọ Ntuziaka Kwesịrị Ekwesị
Top Hammer malite ịgba Brands
Best Hammer malite ịgba Nyocha
N'ozuzu Best Hammer malite ịgba
Best Hammer malite ịgba N'ihi Mee N'onwe Gị
Best Keyless-Chuck Hammer malite ịgba
Nke bụ ihe kasị mma hama malite ịgba maka gị? Taa, anyị ga-abanye n'ime isiokwu ahụ, na-amalite site na ihe ịkụda hama na ọ bụghị. Ọzọkwa, anyị ga-agafe akụkụ kachasị mkpa ka anyị chọọ. Aga m enye gị obere akụkọ banyere ụfọdụ ụlọ ọrụ kachasị elu na-arụpụta ngwa ọrụ a bara ezigbo uru.
Site na oge ị gụchara akwụkwọ, ị ga-enwe ike iburu hama kacha mma maka mkpa gị. Achịkọtara m ndepụta na-enye aka nke ihe ndị kachasị elu m ga - agwakwa gị ihe kpatara otu n’ime ndị a ga - eji bụrụ ebe akụrụngwa gị ugbu a!
Top Pick N'ozuzu: DeWalt DW511 1/2 ″ 7.8 Amp Hammer Drill
Ọrịre DEWALT Hammer malite ịgba, 1/2-Inch, 7.8-Amp (DW511)
7.8 Amp moto na-enye elu arụmọrụ na ...
Agbanwe ọsọ na-enye ohere maka ọnyịnye oghere ...
Dual mode: hammerdrill / malite ịgba maka osisi, ígwè ma ọ bụ ...
Top Picks Maka Specific Jiri:
Kachasị Mma kacha mma DIYers: Ryobi 18-Volt ONE + 1/2 ″ Hammer malite ịgba
Best Keyless-Chuck Hammer malite ịgba: Makita HP1641K 5/8 ″ Hammer malite ịgba Kit
Milwaukee M18 18V Kọmpat 1/2 ″ Hammer malite ịgba / Driver
Bosch 1191VSRK 120-Volt 1/2-Inch Single-Speed ​​Hammer malite ịgba
A hama malite ịgba oghere oghere na ike ihe. Masonry abụghị egwuregwu maka ezigbo igwe eji egwu egwu. Ọbụna enwere ike igwu okwute na ngwaọrụ a.
Ma olee mgbe ị chọrọ otu? Ọfọn, n'eziokwu, ọtụtụ ndị enweghị otu ruo mgbe ha ghọtara na ha chọrọ ya. Mgbe ọ na-ewe gị oge iji dụọ obere akụkụ nke anụ ọhịa, ikekwe ị ga-achọ otu. Ọ bụrụ na ị na-anwa itinye ihe na brik ma ọ bụ ihe mgbochi mgbidi mgbidi, ikekwe ịchọrọ otu, dịka ọmụmaatụ. A na-egwupu igwe eji egwu egwu mgbe ọ bụla tupu ọ ga-enwe ike ịkụ ọkpọ n'ime ihe siri ike.
Chọpụta, ị nwere ike ịgbazite otu mgbe oge ahụ mechara bịa. Onwere ebe ha di kariri igwa gi uzo ato rue onu ahia ihe ohuru iji gbazite. Mana mgbe ịchọrọ ya, ọ bụ ezigbo ego ka ị ghara ịzụ ọzọ ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị ga-egwupu na mgbidi mgbidi ahụ otu oge, ịnwere ike ịme ya ọzọ!
Enwere ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche n'ebe ahụ, yabụ ka anyị kpochapụ ihe mgbagwoju anya ọ bụla banyere ụdị nke ọ bụla na otu esi eji ya.
Mgbe u anyi nile maara. Ndị a bụ akara ngosi ọkọlọtọ nke a pụrụ ịchọta na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla na-arụzi ụgbọala. Enwere ike iji mgbatị ahụ na-egwupu olulu n'osisi, ọkpọ nkụ, plastik, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị nro. The moto na-eme ka bit na-atụ ogho na ihe nke spinning bores a onu. Otú ọ dị, ọtụtụ ihe eji eme ihe mgbe niile enweghị ike ịkụgharị n'ime ihe ma ọ bụ brik.
.B. hama akuakuzinwo na-atụgharị dị ka mkpọpu ala oge niile. Agbanyeghị, ọ na - agbakwụnye ngagharị na - aga n'ihu na ntụgharị iji gafee ebe siri ike. A na-eme ihe eji eme ihe maka itinye oghere na masonry, ihe, brik, hardwood, ma ọ bụ ọbụna nkume. Omume hammering dị ka nke a na-agbaji ihe dị nro n'okpuru ntakịrị. Mgbe ahụ, ihe na-agbagharị agbagharị na-agbapụta site na ihe siri ike karị ma na-achụpụ irighiri ihe site na oghere ahụ.
Nke a bụ nnukwu vidiyo na-egosi ihe dị iche na arụmọrụ n'etiti nkụkọ nkịtị na ịkụ ala. Ha abụọ ga-arụ ọrụ ahụ, mana dịka ị ga-ahụ ngwa ngwa, akụrụngwa hama karịrị ọrụ ahụ.
Rotary hama yiri nke hama uda na ha na-enwekarị mgbagwoju anya. Otú ọ dị, ha bụ ngwá ọrụ dị iche iche.
Ezie na ha abụọ rotary hama na hama u na-atụ ogho mgbe na-enwe mmetụta dị ike n’elu na-gbapuru, na Motors dị nnọọ iche. Ndị hama uji eji a gia usoro ike hama edinam. Ha na-ejikarị ọkụ eletrik arụ ọrụ, ma ọ bụ eriri ma ọ bụ site na batrị batrị.
Igwe na-agbanwe agbanwe, site n'iji ya tụnyere, na-eji pneumatics mee ka piston nwee ike, na-agbanye ya ma na-ahapụ ya. Nke ahụ na-emepụta ọgbaghara. Ngwaọrụ Pneumatic dị ka hama na-agagharị nwere ike itinye ike dị ukwuu ma gafee ihe siri ike ma sie ike. Otú ọ dị, n'ihi mkpa ọ dị inwe compressor ikuku, ndị ọkachamara na-ejikarị ha eme ihe karịa n'ụlọ.
N'ikpeazụ, anyị nwere mmetụta dakpuo ma ọ bụ mmetụta ọkwọ ụgbọala . Site na aha ya, ndị mmadụ n'ozuzu chere na ọ bụ otu ihe ahụ dị ka igwe egwu hama, mana ọ dị ezigbo iche! N’ebe ndị hama uda nwere oghere, onye ọkwọ ụgbọ na-enwe mmetụta na-eji agwakọta nke ịtụgharị ma nwee mmetụta na-akpali akpali iji ntu ma ọ bụ ịghagharị n’elu ala. I nweghi ike iji ugbe ahihia mee ka ịghagha n'ime nkpuru osisi siri ike dị ike. Otú ọ dị, ịnweghị ike iji mkpọmkpọ ihe na-emetụta mmetụta n'ezie ịkụpu oghere ma ọlị, naanị ịkwanye ihe n'ime elu.
E nwere ọtụtụ nhọrọ dịnụ na usoro nke hama u. Corded ma ọ bụ cordless, dị iche iche nke ike, ọbụna nha nke Chuck eji. Ka anyị gafee ụfọdụ nhọrọ dị iche iche dị na ahịa ma kwurịta ihe ịkwesịrị ikpebi ihe igwe egwu kachasị mma maka mkpa gị ga-abụ.
Basically nwetaworị nhọrọ abụọ: corded, or non-corded.
Igwe akwara igwe nwere eriri na-eme ka ị dabere na ebe ị nwere ike ịbanye. Enweghị ike, enweghị mkpọpu ala! Agbanyeghị, ihe akụrụngwa hama na-enye bụ ikike na-agbanwe agbanwe nke na-adịghị agwụ agwụ.
Batrị-ejikwara hama u dị ukwuu maka portability. Y’oburu n’ichoo nkuru ufu gi ka gi rue ebe di omimi, nke a di nfe. Ihe na-adịghị mma bụ na batrị na-agbapụ ngwa ngwa. Ka ọ na-asọpụ, ike nke egwu egwu na-adaba. Nwere ike ịkwakọ batrị batrị ma ọ bụrụ na ịnwee nnukwu ọrụ iji mezuo.
Onweghi nhọrọ dị mma karịa nke ọzọ n'ozuzu ya, mana dabere na mkpa gị, ma otu nwere ike bụrụ ihe kacha mma maka hama.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ka ike i nwere ike inye ike, ọ ga-abụ na ọ ga-agbapụ moto ya. Ọzọkwa, ka ike igwe gị nwere, ka ị na - emeziwanye ogo ọrụ gị.
Mgbe m kwuchara nke ahụ, ihe ka ọtụtụ n’ime ndị mmadụ adịghị mkpa ịfu nnukwu ego buru ibu n’elu igwe ahụ. Maka ọtụtụ ọrụ Mee N'onwe Gị, ụgbọ ala nke nwere ihe dịka 5-8 amps nke ike dị mma. Ọ gwụla ma ị na-anwa igwu nnukwu oghere n'ime ihe siri ike, o yighị ka ị ga-achọ ya. 5-8 amps ga-enye gị ọkara ọkara nke anụ ọhịa n'ọtụtụ ebe siri ike na-enweghị imebi akụ.
kedu ezigbo onyinye ụbọchị nne
Ọ bụ ezie na ike moto dị mkpa, ya mere kwa, ọ bụ iyi. A na-eji okwu ahụ bụ 'torque' na-ezo aka ikike gbagọrọ agbagọ nke moto nwere ike inwe. Ọdịdị dị elu nke ọgbụgba na ụgbọelu gị, otú ahụ ka o nwere ike karịa n'azụ usoro ntụgharị ahụ.
Ọzọkwa, ụfọdụ u nwere nkezi RPM ọnụ, na-agwa gị ugboro ole gị akuakuzinwo bit ga-atụgharị kwa nkeji. RPM dị elu pụtara ọnụọgụ dị elu nke ntụgharị kwa nkeji. Ọ bụrụ na nke ahụ jikọtara ya na akwa torque, akụrụngwa hama gị ga-ebugharị site na oghere ndị ahụ.
N'ebe a, anyị na-ahụ otu n'ime oge mgbe ụdị eriri nwere uru karịa ihe eji arụ ọrụ batrị. Modelsdị ndị nwere eriri na-enwekarị RPM dị elu karịa ka ha na-ejedebeghị na batrị ha. Ebe ị ga - enweta 1500 RPM na ụdị batrị, ọtụtụ igwe eji arụ ọrụ ụdọ ga - enweta 2500-3000 RPM, na - agba ọsọ ọsọ ọsọ nke ọ na - agwụ oghere.
Ngwunye hama kachasị mma nwere nhọrọ iji tụgharịa ntụziaka nke ọ na-agbanye ntakịrị. Nke a nwere ike ọ gaghị adị ka nnukwu ihe, mana ọ nwere ike ịbụ. Ọ bụrụ na ntakịrị arapara n’olulu ị na-egwu, mgbe ụfọdụ ị nweghị nhọrọ ọzọ karịa ịtụgharị ntụgharị iji wepụ ya.
Maka ọtụtụ ndị na-eme N'onwe Gị, otu ọsọ hama drill bụ ihe niile ị chọrọ. Ndị a nwere ọnụego RPM na torque. Ndị a n'ozuzu ha pụtara ìhè n'usoro nke ibu, mana ha na-arụ ọrụ nke ọma.
Agbanyeghị, ọ bụrụ n’icheghị obere ibu ibu ijidesi ike, enwere okpukpu abụọ hama. Speedgba ọsọ izizi ma ọ bụ gia izizi na-elekwasị anya n’igwe, na-agbatu RPM ntakịrị. Nke abụọ ọsọ na-enye gị mma RPM, ma tụbara torque a bit. Ugboro abụọ a na-agba hama nwere ike dochie ngwa ngwa ọkọlọtọ gị, dịka ọsọ nke abụọ bụ ihe niile ịchọrọ maka osisi ma ọ bụ drywall. Akpa ọsọ pụtara maka ịkụ egwu ihe dị ka mgbidi gị ma ọ bụ brickwork.
Chuck size na-ekpebi otú nnukwu nke a bit i nwere ike iji, dị ka Chuck bụ ihe esetịpụ gị bit. Imirikiti chucks nwere ike ijikwa nha ntakịrị n'etiti 1/4 ″ na 5/8 ″.
Enwekwara ụdị abụọ: keyless na key. Keyed chucks chọrọ a isi wepụ ma ọ bụ ikesiike bit na hama malite ịgba. Keyless chucks anaghị achọ isi na ikesiike bit na ọzọ ejiji.
Chọrọ ịnweta ọkụ nke na-ekpughe mgbe etinyere mgbatị gị? Kedụ maka igodo nkpuchi akpọchiri echedo na egwu gị ka ọ ghara ịla n'iyi? Ogwe ihe omimi nke na - enyere gị aka ịchọpụta mgbe oghere gị dị omimi?
Nke ka mkpa bụ na ị chọrọ handgrips dị mma nke ga - enyere gị aka ijide gị mgbe ị na - egwu olulu isi ike?
Mgbaji na-eme mkpatụ, ịdị nha ziri ezi, na ihe ndị dị mfe dịka inwe ike ịgụ akara akara ntụpọ ahụ bụ uru ọ bụla nye onye ọrụ. Ihe nchebe na-agbakwunye ọtụtụ uru. Ọ bụ ezie na ọtụtụ mgbịrịgba na mkpu na ahịa, ọ dị mkpa ịhọrọ ndị dị mkpa maka nkasi obi onye ọrụ na mgbanwe.
Jide n'aka na ị nwere njide dị nchebe ma dị mma, ma ọ bụrụ na ọ bụ mgbochi mgbochi, nke na-enyere aka belata ike ọgwụgwụ nke onye ọrụ. Tụlee hama akuakuzinwo nke na-guzozie nkasi obi maka otú i yikarịrị ka ị ga-eji ya. Ana m akwado ịhọrọ nhọrọ dị ka mkpara miri-nkwụsị ka ị mara mgbe arụchara ọrụ gị. Ọ dị mfe ileghara ọrụ ndị a anya, yabụ kpachara anya na ị ga-elezi ha anya!
Mgbe ị na-ahọrọ igwe egwu kacha mma, ọ dị mkpa ijide n'aka na onye ị họọrọ nwere ihe ole na ole dị mkpa. Dịka e kwuru n'elu, nchekwa bụ isi, mana ihe atọ a dị oke mkpa.
Nke mbu, gba mbọ hu n ’ọfụma gị na - akọwaghị nke ọma. Ọ bụ ezie na ịdị arọ nke mkpọpu ahụ ga-adịgasị iche dabere na ihe nlereanya ahụ, ọ kwesịrị ka ọ dịrị gị mfe maka iji ya rụọ ọrụ nke ọma. Ijide n'aka na ọ ga-edozi nke ọma ga-agbakwunye nkwụsi ike nke mkpọpu ala ahụ n'aka gị. Mkpa ọkụ ọ bụ n'ihe gbasara ibu, obere ogwe aka ị ga-enweta mgbe ị na-eji ya.
Ọzọkwa, chọọ atụmatụ ndị ọzọ na-eme ka ọ dịkwuo mfe iji nwupu gị n'ọnọdụ nchekwa. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ihe eji eme ihe na-arụ ọrụ site na ịbịpụta ihe na-akpali akpali. Modelsfọdụ ụdị dị site na iji mkpọchi mkpọchi, nke dị mma maka oghere miri emi. Ndị a na-enye gị ohere ịgbachi ihe na-ebute ya wee weghachite mkpịsị aka gị, na-eme ka ejide gị na njide gị.
N'ikpeazụ, tụlee ihe banyere hama nke nwere aka nke abụọ. Ihe ndị a na-enye gị ohere ịnwe aka abụọ ka ị dịrị n'emeghị mmiri na-enye gị ikike dị ukwuu. Ma ọ dịkarịa ala, nweta otu nke nwere njide dị nro, n'ihi na nke ahụ na-enye gị ohere ijide n'aka na ngwá ọrụ gị. Mana mgbe obula enwere ike, were ya na aka ozo nke n’enye gi ikike ahu.
Ka anyị gafee ụfọdụ ụdị igwe eji egwu igwe mara nke ọma ma lee ụlọ ọrụ ndị ahụ anya ngwa ngwa.
N'afọ ndị 1880, Robert Bosch guzobere ụlọ ọrụ Bosch na Stuttgart, Germany. Ka ọ na-erule afọ 1906, enwere ọnụnọ pere mpe na North America maka onye na-emepụta ya ka ha malitere ịgbasa n'ụwa niile. Bosch bụ ugbu a aha siri ike na ụlọ ọrụ ngwa ọrụ. Bosch na-ewulite ihe niile site na obere ngwa ọrụ aka dị ka ihe eji arụ ọrụ niile site na ngwa ahịa azụmaahịa dịka nkwọ ọnya na nkwọ tebụl.
E hiwere Makita na 1915 na Japan, ụlọ ọrụ ahụ enwetakwala ọnụnọ zuru ụwa ọnụ kemgbe ọtụtụ afọ. Companylọ ọrụ ahụ malitere dị ka ụlọ ọrụ mmezi maka akụrụngwa eletrik, ma na 1950 ka a gbanwere n'ime imepụta usoro nke eriri nke ha. A na-akwanyere ndị ọrụ ike Makita ùgwù nke ọma n'ọma ahịa, ọ na-abụkarịkarị n'etiti ọnụahịa ọnụahịa maka otu. Otu n’ime ihe ha kwuru na ama bụ ihe okike nke izizi batrị batrị n’afọ ndị 1970, na-ebupụta akụrụngwa ike na-enweghị eriri n’ime ọha mmadụ.
A na-amata agba agba ha na-acha oji na nke ojii ozugbo, maka ọtụtụ mmadụ bụ ihe ngosi nke ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ. Raymond DeWalt rụzuru igwe ọrụ aka ya nke mbụ na 1922, wee hiwe ụlọ ọrụ Pennsylvania ya afọ abụọ ka nke ahụ gachara na 1924. Kemgbe ahụ, DeWalt abụrụla aha n'etiti ndị ọrụ ngo na ndị nkịtị, mara maka ịdị ike nke ngwa ọrụ US wuru nakwa maka ha itinye aka na obodo.
E hiwere Ryobi Seisakusho Co., Ltd na 1943, na -emepụta ígwè obibi akwụkwọ na-anwụ anwụ na igwe ndị yiri ya. Ha abanyeghi n'ahịa ngwa ahia ike rue mbubreyo 1960's. Kemgbe ahụ, ha ejiriwo Deplọ otlọ na-arụkọ ọrụ dịka onye na-ere ahịa bụ isi, ma bụrụ ndị a ma ama n'etiti ahịa DIY. Ngwaọrụ Ryobi na-enye ọnụego ntinye ezi uche dị na ya maka ndị chọrọ ịrụ ọrụ mmezi na-enweghị ịchụ ọrụ.
Kemgbe ha tọrọ ntọala 1924, Companylọ ọrụ Ngwá Ọrụ Milwaukee elekwasị anya na ndị ahịa. Okwu mkpado okwu ha, “O nweghi ihe obula Ma Obu Oru”, na-enye echiche siri ike banyere isi amamihe ha. Milwaukee anaghị ewepụta ihe ọ bụla mana ngwaọrụ enyere maka iji ọrụ ike, gụnyere ngwaọrụ ndị ama ama dịka usoro Sawzall a na-akọ n'akụkọ ifọt. N’ụlọ ọrụ na-egwu ala, ha bụ akụkọ ifo. Mepụta igwe egwu nke mbụ nwere ike ịrụ ọrụ otu aka n'isi na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ ha, Milwaukee kwadoro ebe ha n'ahịa.
Ugbu a na ị maara ihe niile gbasara ihe ịkwesịrị ịdị na-ele anya, ka anyị gafee ihe m nwere maka ịkụda hama kacha mma na atụmatụ ha kpọmkwem!
DeWalt DW511 1/2 ″ 7.8 Amp Hammer malite ịgba
Ihe mbu mbu: nke a DeWalt hama drill na-enye ike kacha ike n'ime nhọrọ m na-eweta taa. 7.8 amps nke ike na-enye gị ike ịme ọrụ siri ike dịka ndị dị mfe.
Ma, ka anyị kwụsị ebe ahụ! Ọ nwere ihe nke abụọ nke enwere ike ịtụgharị na ogo 360, na-enyere gị aka ijide ihe eji ejide n'aka na ngwa gị n'agbanyeghị ọnọdụ ị na-arụ. Ọnụọgụ ọtụtụ nhọrọ ọsọ na-enye gị mgbanwe ma na-enye gị ohere ịkụgharị n'ụzọ dị mfe na mpaghara dị iche iche. Ọ nwere arụmọrụ mode abụọ, na-enyere gị aka iji ya dịka ọkọlọtọ ọkọlọtọ mgbe ị chọghị ike ịgbakwunye ike.
Ngwunye hama a duru 4.3 pound, na-eme ka ọ dị mma ma nwee njikwa mgbe ị na-arụ ya aka abụọ. Nke a bụkwa ihe kasị mma hama malite ịgba maka ihe n'etiti m selections, dị ka o nwere a 5/32 ka 3/8 ″ obosara ikike mgbe mkpọpu ala n'ime ihe. Nke ahụ bụ usoro dị mma iji rụọ ọrụ na-enweghị ịfụfụ moto gị.
Na-enweghị na-esote nzọụkwụ ruo a ọkachamara rotary hama, na DeWalt na-enye gị oké mkpọpu ala ike. Ọ ga-edozi ihe niile site na ihe na masonry na nchara na osisi, ọ bụkwa ihe kachasị m mma maka igwe kacha mma kacha mma.
Ryobi 18-Volt ONE + 1/2 ″ Hammer malite ịgba
Ryobi 18-Volt ONE + 1/2 na. Cordless Hammer malite ịgba
A na-anwale ma nwalee ngwaahịa a ...
Imirikiti ndị na-eme N'onwe Gị achọghị imefu ego buru ibu, ma ọ bụ na-arụ ọrụ ego ole na ole. Ya mere, ọ dị mkpa ịnweta ngwá ọrụ nwere ọtụtụ ọrụ na ọnụahịa dị mma.
Nke a Ryobi hama aku na-enye kpọmkwem na. N'iji usoro iche iche dị iche iche (drill, draịva, na hama), ọ na-enye gị ọrụ dịgasị iche iche ọ ga-arụ. Ọ bụ ọsọ abụọ, na-enye gị nhọrọ nke torque ma ọ bụ RPM mkpa. Secondary ahụ bụ ala na mfe adịgide. Ọ bụ 3.8 pound na-arụ ọrụ nke ọma, na-eme ya n'etiti nhọrọ ọkụ.
Dị ka akụkụ nke usoro ONE, batrị maka ụdị eriri a na-adị ngwa ngwa ma nwee ọtụtụ ngwaọrụ ike. M nwere akụkụ nke Ryobi ONE + usoro na ha na-ebube n'ihi na ìhè gburugburu-ụlọ eji.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nkwekọrịta ma ọ bụ na-achọ ihe maka nnukwu ọrụ dị oke mkpa, nke a nwere ike ọ gaghị abụ maka gị. Ma ọ bụrụ na ị na-achọ hama luo tinye na gị Mee N'onwe Gị ngwá ọrụ setịpụrụ na ụgbọala, Ryobi kwesịrị zuru okè kwesịrị ekwesị na a ọma price ebe.
Makita HP1641K 5/8 ″ Hammer malite ịgba Kit
Oma ogbe Kit, 5/8 ', 6.0A, 0-44, 800bpm
Ngwaọrụ Ike na Ngwa
Mba rụpụta: United States
Ọ bụ ezie na ọ dị mfe ịsagharị ma chọta ebe ọzọ egwu egwu mgbe anyị chọrọ ya, ọ na-akụda mmụọ mgbe igodo mkpuchi gị enweghị ebe ọ bụla.
Obi dị m ụtọ na Makita enyela anyị nhọrọ dị mma maka sistemu na-enweghị isi, na-echekwa anyị ka anyị gbaga na ụlọ ahịa ngwaike. Ọbụna nke ka mma, igwe akwara Makita bụ nnukwu egwu egwu.
Ihe nlereanya 3.7 paụnd nwere eriri nwere ọkpọka 6-amp, na-enye ezigbo ike. A na-edozi aka nke abụọ n'aka ekpe, na-etinye ihe mkpalite n'aka nri maka ndị aka nri, ọ na-enwekwa ntụsara ahụ.
Onye ọrụ ahụ nwere nhọrọ n'etiti usoro ọrụ abụọ: ntụgharị-naanị, ma ọ bụ hama / ntụgharị. Nke a na-enye ike iji ya dị ka ọkọlọtọ mkpọpu ala maka osisi, drywall, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị fechaa na mgbakwunye na masonry.
Makita na-ekwuputa ikike iji ihe ruru 5/8 ″ maka ịkụ ihe. Ihe ọ bụla karịrị ọkara anụ ọhịa ga-abụ ihe siri ike na moto 6-amp, yabụ ana m akwado ịrapara na obere klọọkụ pere mpe. Nye ya nkwụsị n'etiti nnukwu oghere buru ibu ka ị ghara itinye ihe ọghọm moto.
N'ihe niile, ndị Makita na-enye ndị chọrọ ịrụ ọrụ na-enweghị isi nnukwu ngwaahịa, na-etinye ha elu na ndepụta m.
Havetụlela otu ngwa ọrụ ma hụ ihe niile n'anya banyere ya, belụsọ otu ihe? Nke ahụ bụ ebe m na-eguzo na Milwaukee hama akuakuzinwo. Ọ fọrọ nke nta ka ọ zuo oke… ma ọ bụghị ezigbo.
Ekwela ka m mehie, ọ dịghị ihe ọjọọ banyere ya. Ọ bụ otu nke otu nke kachasi ike na 1800 RPM, ma nwekwaa nnukwu iyi. Arọ dị ukwuu na 3.4 pound. Ọrụ dị iche iche na ọtụtụ gia na-enye ike dị iche iche. O nwekwara usoro buru oke ibu nke ga-emechi moto ahụ mgbe ọ nwere ike ịnwebiga oke ọkụ, nke gbakwunyere.
Mkpesa kachasị m bụ na ọ bụ kọmpat. Nke ahụ bụ perk kwa, karịsịa mgbe ị na-arụ ọrụ na oghere siri ike. Ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ na nso ụlọ na-arụ ọrụ eletriki ma ọ bụ ihe yiri ya, nke a nwere ike ịbụ nke zuru oke maka gị.
N'ihi ọdịdị ya dị nro, ọ na-efunahụ nhọrọ nke njikwa nke abụọ maka njigide siri ike, echekwara m nke ahụ n'ezie. Ọ bụrụ na ọ nwere ya, nke a ga - abụ ihe mgba megide DeWalt maka ịkụ ọkụ kacha mma.
Maka ihe ị nwetara, Milwaukee bụ ihe siri ike ma sie ike, American mere hama drill nke ga-arụ ọrụ kacha sie ike maka gị. Ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ n'ime oghere dịpụrụ adịpụ, nke a bụ mkpọpu ala gị.
Bosch 1191VSRK 120-Volt 1/2-Inch Single-Speed ​​Hammer malite ịgba, Blue
Fechaa imewe zuru okè maka obere dayameta ...
7 amp moto na-enye ihe kachasị elu ...
360 ogo inyeaka ahụ, wuru na-ngwa ngwa ...
Mgbapu a na-amasị m ma na-enweghị m mmasị maka otu isi ihe kpatara ya: ọ dị arọ.
Ogwe osisi Bosch nwere nnukwu igwe 7 amp. O nwetara aka inyeaka ogo 360. Ọ nwere nhọrọ rotary ma ọ bụ hama / rotary. Ọ bụ eriri, na-abịa na ikpe siri ike, ọ bụ ezie na ọ bụ otu ụdị ọsọ, ọ nwere n'ezie ike ịrụ ọrụ ya.
jeans kacha mma maka ụmụ nwanyị 2021
Ma ọ dị arọ. Mbupu ibu na ikpe, akuakuzinwo, na a omimi nlele bụ a beefy 7.2 pound, na ikpe n'ezie anaghị itu otú ahụ. Nke a bụ na ngwụcha ngwụcha nke ihe m na-akụ maka ibu. Ọ gwụla ma ị dị njikere iburu ibu ahụ, ị ​​nwere ike ịtụle ihe nlereanya ọzọ.
Nke a ka bụ nnukwu egwu egwu na nhọrọ siri ike. Agaghị m atụgharị imi m otu ma ọ bụrụ na e nyere m! Mana enyere m aka, m ga - ahọrọ ihe ọ ga - adị ntakịrị iji belata ike ọgwụgwụ n’oge eji eme ihe.
Na mkpokọta, DeWalt meriri ọkpụkpọ m maka akụrụngwa igwe kacha mma dị taa. Enweghị m ike ịkatọ otu ihe banyere egwu ahụ. Ọ bụ n'ezie ihe kacha mma hama akuakuzinwo maka ihe, na ọ nwere ike ijikwa isi ihe aga-eme na osisi ma ọ bụ ndị ọzọ ìhè ihe oke! Ma ị na-etinye a Ihu-oche-ite potting ma ọ bụ na-agbalị ịjị ọhụrụ gị griin haus ka ya wụsara ihe ndabere slab, na DeWalt nwere ike ijikwa ya.
You nwere nhọrọ dị iche dị ka igwe kacha mma, ma ọ bụrụ na ọ bụ, gịnị kpatara ya? Mee ka m mara n’ihe a!
4th nke Julaị ntu French
otu esi aghọ egbugbere ọnụ
echiche abalị abalị maka ndị di na nwunye
kedu ezi onyinye ụlọ
nkuku n'ihu ndị mmadụ n'azụ